Inona avy ireo mampiavaka ny Gmail? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 700
Rehefa mandeha ny fotoana Gmail nanao fanavaozana maro ary noho izany antony izany dia hasehonay anao,
Fijerena resaka: Gmail dia mamela anao hahita ny mailaka miditra sy mivoaka rehetra, izay azonao hamarinina amin'ny alàlan'ny fanamarinana ireo mailaka nataonao teo aloha raha mila fanazavana. Raha tsy azonao jerena ity fomba fijery ity dia tsy maintsy miditra ianao:
Azonao atao ny mampandeha ilay safidy.
Hamafa ny fandefasana: Nandefa mailaka izay tsy tianao hatao intsony ianao, mba hahafahanao manafoana ilay fandefasana tokony hiasa haingana, ary mankamin'ny efijery ankavia ianao ary tsindrio eo amin'ny foanana.
Fanamarihana zava-dehibe: Gmail dia mamela anao hisafidy izay mailaka tianao ho marihina fa iza amin'ireo tsy misy. Raha te hanao an'io asa io dia tokony hampavitrika sy hiditra:
Tags: Manamora ny fitantanana mailaka betsaka izy ireo. Azonao atao amin'ny fomba manaraka ity:
Mandehana any amin'ny toe-javatra ankapobeny.
Mandehana any amin'ny safidy Tags.
Safidio ny safidy tianao.
Sokajy: Voalamina ho azy ny mailaka ary azo ampiana amin'ny fampandrenesana, forum, sosialy na fampiroboroboana. Ny fomba hidirana aminao dia mila mampiditra "Tags" eo ambany.
Matory: Ity safidy ity dia manafina ny mailaka mandra-pahatongan'ny fotoana irina, izany hoe manjavona ao anaty boaty ary afaka mipoitra indray isika amin'ny fotoana irina.
Fandefasana fandefasana fandefasana: raha mila mandefa ny mailaka tonga ianao rehefa mila izany dia azonao atao ny mandahatra izany amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ny zana-tsipìka eo akaikin'ny bokotra fandefasana.
tsiambaratelo: Manome anao ity safidy ity ny Gmail izay mahatonga ny mailaka anao hitokana-monina, miaraka amin'ny:
Zahao ny safidy daty lany daty.
Dial kaody fidirana.
Zahao ny safidy tsy azo ampitaina, adika na hafa.
Fantsona fampidirana marobe: Gmail miaraka amin'ity fiasa ity dia azonao atao ny manampy takelaka boaty inbox dimy mankany amin'ny iray lehibe. Azonao atao toy izao ny manao azy ireo:
Mandehana any amin'ny toerana efa mandroso
Ny fitaratra varavarankely marobe dia ho fitaratra.
Hamboarinao ireo izay ampianao.
Valiny efa voafaritra: Afaka mamorona mailaka lava ianao ary afaka manisy valiny raha toa ka tsy maintsy manoratra valinteny mitovy foana ianao. Azonao atao izany:
Mandehana any amin'ny toerana efa mandroso.
Tsindrio ny valiny napetaka mialoha.
Mailaka mbola tsy voavaky: ampidiro ny mari-tsoratra: tsy voavaky amin'ny fikandrana fitadiavana.
Mametaka sary: Amin'ity safidy ity dia azonao atao ny misintona sary sy rakitra hafa mankany amin'ny mailaka Gmail mampiasa Chrome.
Ampidiro ny Google Maps: miaraka amin'ity dia azonao atao ny mampiditra sarintany ao amin'ny vatan'ilay hafatra.
Mpandika teny Google: Fotoana tsara omen'ny Gmail anao handika hafatra mailaka.
Mampiasà Google Docs: Ahafahanao mamorona antontan-taratasy amin'ny mailaka rehetra. Ny antontan-taratasy mifatotra dia azo avadika ho antontan-taratasy mifanaraka amin'izany ihany koa.
fampiasana Google Calendar: Afaka mandefa hafatra "SMS" ianao izay fanairana fampahatsiahivana ny asany.
Paositra laharam-pahamehana: Afaka manafatra ny boaty mailakao sy ny tantaran'ny mailakao ianao, manasokajy azy ireo ary mamindra azy ireo amin'ny fitoeram-bokatra samihafa, arakaraka ny filàna ilainao. Azonao atao koa ny manova amin'ny alàlan'ny fikirakirana mailaka Gmail.